Soo dejiso waraaqaha gidaarka ee Galaxy S21 | Androidsis
Soo dejiso waraaqaha gidaarka ee Galaxy S21
Maaddaama taariikhda soo bandhigidda ee Galaxy S21 ay soo dhowaatay, wararka xanta ah ee la xiriira terminaalkani waa mid ficil ahaan maalin kasta leh waxaana jira faahfaahin aad u yar oo ku saabsan terminal-kan oo aynaan ogeyn maanta, maadaama ay yihiin darbiyada, oo ah kii ugu dambeeyay ee laga soo minguuriyey bogga Rydah .
Wargeysyada la socda aaladaha gaadha suuqa ayaa loogu talagalay inay muujiyaan shaashadda iyo naqshadda hore, iyagoo ku dhuumanaya inta badan kiisaska, daloolka hore ee halka ay ku taal kamaradda dhexe iyo sooyaalladani aan laga reebanayn (ugu yaraan marka loo eego kamaradda ).
Si aad u soo dejiso sawir-qaadayaasha, xallintooda ugu sareysa waa inaad booqataa websaydhka Rydah iyada oo loo marayo xiriirkan. Xirmada darbiga ayaa ka kooban:
12 waraaqo sawiro xallin sare leh
4 waraaqaha xalka sare leh ee nooca 'DeX desktop desktop'
6 waraaqaha xalka sare leh ee shaashadda qufulka.
Faylka waxaa lagu cadaadiyey qaabka Zip, markaa waxaad u baahan doontaa maamule fayl si aad faylka uga furto mar dambe taleefankaaga casriga ah. Wargeysyada ayaa leh muuqaal muuqaal ah oo muujinaya muuqaalka shaashadda, mid ka mid ah waxyaabaha ay Samsung soo saarto oo laga helo ficil ahaan shirkad kasta oo soo saarta taleefannada casriga ah ee suuqa yaalla.
Taariikhda soo bandhigida ee cusub ee Galaxy S21 waxaa loo qorsheeyay Janaayo 14, taariikh ay Samsung u badan tahay inay xaqiijin doonto bilawga sanadka. Daahfurka moodooyinka ugu horreeya waxaa horeyba loo qorsheeyay Janaayo 29, 15 maalmood kadib soojeedintooda, soo bandhigid ah, sida tan xaddiga Xusuusin, waxay noqon doontaa khadka tooska ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Soo dejiso waraaqaha gidaarka ee Galaxy S21
Sida loo tijaabiyo wararkii ugu dambeeyay ee Netflix: Noqo tijaabo
Exynos 2100 waxaa la soo bandhigi doonaa bisha Janaayo 12 waxayna noqon doontaa processor-ka uu qaadi doono Galaxy S21